आधा विवाह नसकिदै एक्कासी मण्डपवाटै वेहुला भागे, कारण सुन्दा सबै आश्चर्यचकित !! – Khabar28media
आधा विवाह नसकिदै एक्कासी मण्डपवाटै वेहुला भागे, कारण सुन्दा सबै आश्चर्यचकित !!
June 6, 2021 June 6, 2021 - by Vikash - LeaveaComment
दाइजोका कारणले मण्डपवाट भाग्दा एक युवाले उल्टै जरिवाना तिनुपरेको छ । मोटरसाइकल दाइजो नपाएर वरमाला भइसकेपछि मण्डल छोडेर भागेका वेहुलालाई बेहुलीलै गजवको सजाय दिएकी छन् । दाइजोमा मोटरसाइकल नपाउँदा विवाहको आधा काम सकिएपछि मण्डपवाटै हराएका वेहुलालाई वेहुलीले दिएको सजाय रोचक छ ।
समाचार अनुसार भारत बिहारको नालंदा जिल्लाको हो । चंडी थाना इलाकाबाट सुहावन दास अपनो छोरा विजेन्द्रको लागि वुहारी लिन जन्ती सहित पुगेका थिए । वेहुलीको घर बिहारशरीफमा हो । वेहुलीका परिवारले वेहुला मोटरसाइकल नपाएका कारण मण्डप छोडेर हिडेको थाहा पाएपछि सवक सिकाउने उपाय अपनाए । उनीहरुले वेहुलाको वुवा र जन्तीलाई ब’न्ध’क बनाएर राखे र प्रहरीलाई बोलाए ।
Previous Article भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फेरी नेपाल भ्रमणमा आउँदै, कहिले र किन आउदै छन् त ? हेर्नुहोस् ।।
Next Article सावधान: एकपटक कोरोना लागेपछि कहिलेसम्म पुन सङ्क्रमणबाट बचिन्छ ?? एस्तो भन्छन चिकित्सक !